Antigua iyo Barbuda Jinsiyaddiisa Antigua Harbor Island Reserve Share
Qaadashada saamiga hudheelka si loo helo dhalashada Antigua iyo Barbuda
Baxsashadaada ee Kariibiyaanka villa!
Tuulada quruxda badan ee loo yaqaan 'Jolly Harbor', kaarka boostada waxaa ku yaal dhismayaal casri ah oo si casri ah loo qurxiyey oo si buuxda u qalabaysan 2-qol jiif ah. Guryaheena guryaha waxay bixiyaan aragtiyo dusha sare ah oo ku saabsan biyaha iyo muuqaal cagaaran oo cagaar leh oo ku wareegsan buuraha ku xeeran. Guryaheenna xeel dheer ayaa ah dib u gurasho wanaagsan oo xulasho weyn u ah qoysaska, maalmaha fasaxa ah, maalmaha Malabka, safarka keli ah ama asxaabta.
Martigalinta shan xidigle ah
Raaxada martidayadu waa mid noo ahmiyad weyn noo leh, sidaa darteed laga bilaabo waqtiga aad soo gasho Degmooyinka Jasiiradda Harbor, waxaad dareemi doontaa deganaan iyo nasasho. Ma jiraan wax nafaqo-darro noo ah.
DAQIIQADII 5 AAD BUAC KU DHACA
Kaliya 5 daqiiqo oo socod ah waxaad marin u leedahay mid ka mid ah 365 xeebta jasiiradda ... haa, waxaan haynaa 365 xeebood. Sidoo kale aagga Jolly Harbor waxaa ku yaal qurux qurux badan, oo aan la baarin oo 1,6 km u jirta Jolly Beach.
5 CIYAARAHA XIDIGAHA GOOBAHA
Xullo ballaaran oo xeebta ah, makhaayado caadi ah oo qurux badan oo aad ku raaxeysan karto cocktail aad jeceshahay inta lagu jiro saacadaha farxadda leh iyo qorrax dhaca qorraxda.